Bodyrub muNew York - RUBPAGE // Muviri Rubha / NuRu Eotic Massage
Bodyrub muNew York
Kutsvaga kwako kwapera. Chiitiko zvakanakisa kushaya masero kuMidtown East, Manhattan. Tsanangura kuzorora kwako. Gamuchira zvido zvako. Bhuka iyo chikamu chehope dzako. Tinoshanda nesimba nekuti unokodzera.
Funga nezve edu akanaka mamodheru kuti akubatsire iwe kuenda kune yako Inofara Nzvimbo. Isu tinoziva chaizvo zvaunoda uye hatinyari kununura. Huya uzvionere wega!
Iyo Session inogona kuve nyore yakagadzirirwa kune zvako zvese zvaunoda. Isu tinobatanidza erootic kukwiza muviri, Nuru massage, kushamba kwekunakidzwa, ruzivo rwe fetish, uye kushambidzika padhuze. Tinoda kushanda nevakaroora! Uya nemunhu wako waunofarira kuti aedze uye asangane neako sub-kuziva imwe pane imwe!
Zvinofadza zvikuru kuona kuchinja kunoita vanhu. Nhasi unogona kunge uri mumwe akarasika mutorwa muNew York nehombodo izere nematambudziko. Mumwedzi tinogona kuona maziso ako akajeka uye tinzwe kupenga kwako nyaya dzekubudirira! Tinoziva chakavanzika chemufaro wechokwadi - ita zvaunoda uye ufare chete nekuti!
Vatengi vedu venguva dzose vakangoita sewe .. vasina chokwadi nevasingazivi. Vakatipa mukana uye ikozvino tiri shamwari dzinogovana zvakavanzika, kusimudzirana uye kuchinjana zvinwiwa zvepabonde uye endorphins.
Muvhuro: 10: 00 - 23: 00
Chipiri: 10: 00 - 23: 00
Chitatu: 10: 00 - 23: 00
China: 10: 00 - 23: 00
Chishanu: 10: 00 - 00: 00
Mugovera: 10: 00 - 00: 00
Svondo: 10: 00 - 23: 00